Tim Cook anotaura nezve kuvanzika mukambani nyowani vhidhiyo | Ndinobva mac
Isu tajaira kuona ekushambadzira mavhidhiyo eiyo Apple TV + akateedzana, asi panguva ino mukurumbira wese unotorwa naTim Cook. Zvakanaka, zvinotorwa neyakavanzika yekambani yeApple uye hapana munhu ari nani kuzvitsanangura kupfuura iye CEO wekambani iye. Vhidhiyo yakanzi «Kuvanzika» Inogona kuonekwa yatove paYouTube chiteshi icho Apple chine paGoogle network.
Muvhidhiyo, Cook anotarisa pakutenda kwaApple kuti kuvanzika ikodzero yemunhu iyo inotangira zvakadzika mukati mechero chigadzirwa chaunogadzira. Izvi zvinoreva zvakare chiitiko cheApple cheWWDC musi waChikumi 7, panguva iyo yakaunza zvinhu zvitsva senge email kuchengetedzwa kwepachivande uye Chinyorwa Chakavanzika.
Pane imwe nguva muvhidhiyo, Tim Cook anoti:
Aya makuru epachivande maficha ndeaya achangoburwa mune akareba akateedzana ezvigadzirwa zvikwata zvedu zvakagadziridzwa kuvandudza kujekesa uye kuisa vashandisi mukutonga kwedata ravo. Izvi zvinhu zvinobatsira kupa vashandisi runyararo rwepfungwa nekusimbisa iko kudzora uye rusununguko rwekushandisa tekinoroji yavo vasinganetseke kuti ndiani akatarisa pamusoro pefudzi ravo. KuApple, takazvipira kupa vashandisi iyo sarudzo mashandisiro anoita data rako uye anovaka zvakavanzika uye chengetedzo mune zvese zvatinoita.
Takataura kakawanda nezve kugona kwaApple kuchengetedza zvirimo mumidziyo yayo kure nekunzvera maziso. Chinhu chinowanikwa nevanhu vazhinji kuda kubhadhara zvinopfuura zvakafanira (kana zvichibvira). Hazvishamise, mushure mezvose, kuvanzika kuri kodzero inokosha izvo hapana mumwe wedu anofanira kuramba kana kurega kurasikirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Tim Cook anotaura nezve kuvanzika mune vhidhiyo yekambani nyowani